Ungayifaka njani okanye uyenze i-LLC kulo naliphi na ilizwe
Inkqubo yokubandakanya ilula, nokuba uyenza njani, igqwetha, uxwebhu lokugcwalisa uxwebhu kwi-Intanethi okanye uzenzele ngokwakho; Kukho inkqubo eqhelekileyo ekufuneka ilandelwe, nantsi into ofuna ukuyigcina engqondweni malunga nokufaka ishishini lakho:
Khetha igama lenkampani kunye nesazisi
Ukuvavanywa kokufumaneka kwegama
Lungisa kwaye ugcwalise amanqaku amanqaku okufakwa kwiofisi yaseburhulumenteni
Hlawula iifizi zokufayilisha zikarhulumente
Le yeyona nkqubo yokwenyani "yokubandakanya", engekho ngaphezulu kokugcwalisa amanqaku okudityaniswa okanye ukwenziwa kweofisi yaseburhulumenteni, iyodwa, ilula. Kukho izinto zokudityaniswa kweposi eziya kuba yinxalenye yenkqubo iyonke, enje:
Ukunyulwa kwenqanaba lerhafu kunye ne-IRS
Ukufumana inombolo yesazisi yomqeshi
Ukuqala incwadi yokurekhoda
Uphawu lwentengiso okanye ukulungiswa kwelungelo elilodwa lomenzi
Ukubhaliswa kwegama lommandla
Ishishini ngalinye liya kuba yinkqubo eyahlukileyo eyahlukileyo kwaye kuxhomekeke kuhlobo lwento eyenziweyo, kubambiswano olunqongopheleyo kunye neenkampani ezinamatyala, ukudala isivumelwano sokusebenza, izivumelwano zobambiswano kunye namaxwebhu obunini ziya kuba yinto ebalulekileyo kwinkqubo yokudityaniswa kweposi.
Ukukhetha igama lenkampaniUkukhethwa kwegama kufuneka kungqinelane neemfuno ezithile ezithile. Amagama angavumelekanga kunye nesazisi esidibeneyo. Isazisi esidibeneyo siyinxalenye yegama leziko, njenge- "Incorporate" "Inkampani" "Inkampani", "LLC", "Ltd", "limited" okanye isifinyezo esamkelekileyo kwezi. Igama lakho olikhethileyo alinakuba lichanekile okanye lifane kakhulu kwishishini esele lifakiwe kwimeko efanayo. Igama olikhethele inkampani yakho akufuneki libe lilinge lokufaka imali kulwazi lweshishini elibhalisiweyo. Ukuba igama lakho liphawulwe liya kukuvumela ukuba ulisebenzise kuwo onke amazwe angamashumi amahlanu. Ezinye izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo zezi:
Igama lenkampani alinakuthetha ukudibana nenkolo, isisa, igqala, okanye umbutho wobungcali ngaphandle kokuba iqhina liqinisekiswe ngokusemthethweni ngokubhaliweyo.
Igama lenkampani alinakho ukulahlekisa, okuthetha ukuba awunakuba nebinzana elithi, "ibhanki" kwigama lakho lenkampani ukuba inkampani ayonelisekanga ziimfuno zikarhulumente zokubandakanya njengebhanki.
Igama elinye okanye amabini anokuchongwa ukunika enye inketho ukuba ukhetho lwakho lokuqala luthathwe egameni.
Jonga ukubakho kokukhethwa kwegamaIgama olikhethileyo kwishishini lakho kufuneka litshekishwe nemeko oyifakayo ngaphambi kokuba ufake amanqaku akho. Le yindawo apho inkonzo yobuchwephesha inokukugcinela ixesha ngokusebenzisa ubudlelwane babo norhulumente. Ukuba ufaka nawaphi na amaxwebhu anegama esele lithathiwe, ukufayilwa kuya kukhatywa. Ukujonga ukubakho, ungasebenzisa ukukhangela igama ngefowuni, ukuba ikhona, okanye ujonge iwebhusayithi yelizwe lakho kwaye wenze uphando kwiirekhodi zikawonkewonke kwi-Intanethi
Sebenzisa ukujonga igama ngefowuni ukuba iyafumaneka kwimeko obandakanya kuyo
Jonga ukufumaneka kwegama ngaphambi kokugcwalisa amanqaku okufakwa
Sebenzisa inkonzo yokufayilisha ngobuchule
Fayilisha amaxwebhu afunekayoAmaxwebhu alungiselelwe ukuba kufuneka uwafake ukuze ubandakanye anokwaziwa ngokuba "ngamanqaku okubandakanya" "amanqaku ombutho" "umqulu" okanye "isatifikethi sokubandakanywa" kuxhomekeke kwimeko yakho. Amanqaku afayilishwe kunobhala weofisi kaRhulumente, okanye kwenye iarhente yolawulo lweshishini. Amanye amazwe afuna ukuba amanqaku okufakwa afayilishwe yenye ifom yolwazi.
Fayile amanqaku akho agqityiweyo okufakwa
Chwetheza iifom ukuze zirekhodwe ngokucacileyo
Thatha isigqibo kwiarhente ebhalisiweyo yombutho-kuya kufuneka utyumbe umntu oza kwamkela amaxwebhu asemthethweni kwidilesi yezomthetho egameni lenkampani.
Imicimbi eyongezelelweyo yoMbuthoUkulandela ukufayilwa kwamanqaku okufakwa, kufuneka ucoce iinkcukacha ezimbalwa ezibalulekileyo ukugqibezela umbutho wombutho wakho. Amanqaku okufakwa afakwe kurhulumente kufuneka amkelwe ngokusesikweni yinkampani yakho, imithetho kamasipala kufuneka yamkelwe (yemibutho), izivumelwano zokusebenza okanye zokusebenzisana (kubambiswano olunqongopheleyo kunye neenkampani ezinamatyala), amagosa anyuliweyo, isitokhwe esikhutshiweyo kunye nophawu lweshishini oluvunyiweyo . Ngokwesiqhelo, ezi zenzo zenzeka kwintlanganiso yombutho. Kule ntlanganiso abalawuli abacetywayo, amagosa, kunye nabanini zabelo benza izigqibo ngale micimbi yombutho. Izigqibo ziyarekhodwa “njengemizuzu” yentlanganiso.
Yamkela amanqaku okufakwa
Ukwamkela imithetho yedolophu okanye izivumelwano
Nyula iiofisi ezinje ngomongameli, usekela-mongameli, unobhala kunye nonondyebo
Vuma uphawu lweshishini
Lungisa iiRekhodi zeZikoUmbutho kufuneka ugcine iirekhodi ezinenkcukacha kakhulu malunga nezinto ezenziwa lishishini. Uyazibulela ngokugcina ezo ngxelo zinobunono ukuba ayicingeki eyenzekayo, kwaye une-IRS efuna ukujonga iirekhodi zakho zeshishini. Iibhanki ziya kufuna ukubona iirekhodi zakho zeshishini ukuze zikhusele imali kwiqumrhu. Oku kugcinwa kweerekhodi kubalulekile kuba kububungqina bokuba inkampani yakho igcinwe ngokufanelekileyo kwaye ilungelelaniswe kakuhle.
Qalisa kwaye ugcine iirekhodi zenkampani ezineenkcukacha
Iirekhodi ezineenkcukacha zibonisa ukuba inkampani icwangcisiwe kwaye isebenza ngokuchanekileyo
Ngoku ukuba uyayazi inkqubo yokufaka kunye nokufaka inkqubo yokufaka, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba ngubani oza kumnika umsebenzi. Ngokucacileyo unokwenza isigqibo sokwenza wonke umthetho ngokwakho ngeendleko ezithile. Amagqwetha anokuba lolunye ukhetho kwixabiso eliphezulu kakhulu.
Ukukhetha ukulungiswa kwamaxwebhu asemthethweni kunye ne-arhente yokufayilisha, ngesiqhelo, yeyona ndlela ikhawulezayo neyona ilula yokubandakanya. Iiarhente ezihloniphekileyo zobuchwephesha zinokhetho olufumanekayo kubo njengokufayilisha nge-elektroniki okunokukhawulezisa kakhulu inkqubo yokubandakanya.
Iinkampani ezihlanganisiweyo zeefayile ezingamakhulu amaxwebhu ngeveki, kwilizwe liphela kwaye yeyona ndawo ifanelekileyo yokufaka ukwaneliseka kwabathengi.